Isikhathi Sokuqhuma Ngebhizinisi Lakho (Ungaphuthelwa Imayini) | Martech Zone
NgoLwesine, ngoMashi 12, 2015 NgoLwesine, ngoMashi 12, 2015 Douglas Karr
Douglas Karr I-Rap Tribute https://t.co/oPodYLEZnQ @nomfundo_m #ukulele http://t.co/gVR64opiLM
- Rapp Itt (@rappittmusic) Mashi 10, 2015
Ukusho ukuthi ngishaywe ngumoya yinto encane. Angikwazi ukuyeka ukuhleka ibibhalwe kahle kanjani le rapn futhi ngacwaningwa ngumuntu engangingakaze ngimbone. Ukuthi othile kwakunguDan Stokes.
UDan waqala Rappitt.com futhi ukuqala kokuqala okuboshwe ngokwezimali, bekufuna izindlela ezihlukile zokuthola igama (ngiyayithola?) mayelana nebhizinisi labo. Bathole ifayela le- Martech Zone futhi ngemuva kokubheka phezulu nginqume ukuthi ngizoba isisulu esikhulu.
Ngiyakuthanda… ukumaketha kwe-gorilla nokumaketha okuthonya konke wadwengula phezulu ku-tweet. (Ngikwenzile futhi). Nayi indaba kaDan:
Ngakha uthando lomculo, futhi ngidlwengula ngokukhethekile, eminyakeni eyi-15 edlule. Ngenkathi uthando lwami lomculo lukhula, ngabona ukuthi ngifuna ukwenza lokhu ngikhethe ikhono lomsebenzi ... Ku-Rappitt.com, sizizwa sengathi sidale futhi saphelelisa ubuciko bethu, umphumela uwumkhiqizo odala injabulo nenkambiso kuzo zonke izikhathi. Ngenze ama-100 alawa mavidiyo ngenzela abangane, osebenza nabo, kanye nosomabhizinisi ngokufanayo eminyakeni edlule.
Intengo kaDan ayinakulinganiswa nalolu hlobo lobuciko futhi ividiyo yokugcina iyibhonasi eyengeziwe. Uyazi ukuthi ufuna ingoma ye-rap mayelana nephrofayili yakho yomphakathi noma ibhizinisi lakho angithi?
Ngiyethemba, uDan uthola ama-oda athile kini bantu ngecebo lakhe elihle. Ake sibonise ukuthi lolu hlobo lokukhangisa olunomthelela luyasebenza!
Tags: funnyrapinsizakalo ye-raphloniphani